Izinambuzane ezinhle kakhulu zingasibulala sonke uma singanakile - BGR - Tamban RELAY
Accueil » ISAYENSI "Izinambuzane ezinhle kakhulu zingasibulala sonke uma singanakile - BGR
Izinambuzane ezinkulu zingasibulala sonke uma singanakile - BGR
Ungase ungakuboni ebusweni, kepha kuzoba nomjaho wezingalo ekhemisi lakho lasekhaya. Nsuku zonke, ama-antibiotics asatshalaliswa kubantu abagulayo abaningi emhlabeni wonke. Isikhali sethu esihle kunazo zonke ekulweni nezinhlobo eziningi zamagciwane futhi asisebenzele isikhathi eside. Kuqala ukuguquka.
Impilo ithola indlela yayo kanti namagciwane awafani. Senze izidakamizwa ukuthi sizibulale ekhaya, ezilwaneni zethu nakukudla esikudlayo, kepha bekuyindaba yesikhathi ngaphambi kokuba laba bantu abancane bathole indlela yokubazungeza. Namuhla, amagciwane alwa nemithi elwa namagciwane asevele ethinta abantu, futhi umbiko omusha oshicilelwe yiCenter for Disease Control and Prevention kwembula ukuthi kufinyelela kubantu abane ihora ngalinye e-United States kusuka kulawa "bhakteriya" amakhulu.
Umbiko awanciphisi amagama futhi ulimi olusetshenziswe yi-CDC luyesabisa. Isikhungo sithi akusadingeki ukushaya isihlahla sikhulume sengathi amakhemikhali azophela ngokuzayo. Ayahluleka nanamuhla futhi umuthi wanamuhla uyahluleka ukubamba.
Iqembu likhipha ukuthi ama-pathogen we-18 njengosongo olukhulu futhi libahlukanisa ngamaqembu ngokususelwa ekusimeleni. Lo mbiko ubandakanya izinhlobo ezinhlanu zezifo ezithathwa njengeziphuthumayo kakhulu, kanye namanye ama-11 amanye ama-pathogens afanele "njengosongo olukhulu".
Mhlawumbe okubi kakhulu kunakho konke ukuthi ukumelana nemithi elwa namagciwane yiphutha lethu. Ukusatshalaliswa kokuzithandela kwemithi elwa namagciwane ngenxa yezifo ezincane kakhulu - kanye nokusetshenziswa okubanzi kwalezi zidakamizwa kwezolimo - kunikeze lama-microorganisms izimpi eziningi zokulwa ukuthi ziphenduke. Lapho i-pathogen iguquka ukungavikeleki kwe-antibiotic enikeziwe, leli gciwane elisha lingadala udambise.
Ososayensi basaqhubeka nokulwa namagciwane amasha ukulwa nezifo ezikhulayo, kepha izinketho ezintsha zivame ukuhamba kancane futhi zihamba kancane. kubiza kakhulu Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kabanzi kwezindlela ezintsha zokwelapha kungaholela ekuguqukeni kwamagciwane noku fungus ukukunqoba nakho.
Ngokwalokho esingasiza sonke, i-CDC iqokomisa imiphumela emihle yokugoma, engaholela
Umthombo wesithombe: Oleksiy Maksymenko / imageBROKER / Shutterstock
Lowo owake waba ngumeluleki we-FDA ufuna ukuvinjelwa kokuhlinzwa kwe-LASIK - BGR
Lesi sigcinimagumbi sizokukhokhela i-25 000 $ ukuthola izinhlamvu zemali zeMissorite zaseMissouri - BGR